အကောင်းဆုံးဘတ်ဂျက်မီးသတ်ဆေးရည်ဖောင်ဖာလက်ထုတ်လုပ်သူထုတ်လုပ်သူ | weierxin လုံခြုံ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > သေနတ် Safe > မီးလောင်ကျွမ်းသောရိုင်ဖယ် Safe
သေနတ်စွမ်းရည်များကို optics သို့မဟုတ်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများမရှိသောသေးငယ်သည့်စံအရွယ်အစားရိုင်ဖယ်ကို အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်သူများကထုတ်လုပ်သူများကတွက်ချက်သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင်လူတိုင်းနီးပါးသည်မျက်သေအောင်းစွမ်းဆောင်ရည်ပမာဏကိုအမှန်တကယ်ကိုင်ထားနိုင်သည့်သေနတ်စွမ်းဆောင်ရည်ပမာဏကိုပြုလုပ်သောသေနတ်များနှင့်အငြင်းပွားမှုများကိုအသုံးပြုကြသည်။ သေနတ်များထက်ပိုမိုကြီးမားသောသေနတ်များဖြင့်သေနတ်ဖြင့်ပစ်သတ်ခံရရန်သေနတ်များဖြင့်0ယ်ရန်သင့်အားသေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်မှုနှင့်မှန်ဘီလူးများကိုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောအရာများကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။
မင်းဘယ်မှာလဲစဉ်းစားပါ'သင်၏သေနတ်ကိုသင့်အိမ်၌လုံခြုံစွာထားလိုသည်။ အကြောင်းရင်းများတွင် -
လက်လှမ်းမီမှု - သင့်သေနတ်၏မဟာဗျူဟာကျသောနေရာချထားမှုသည်အရေးပေါ်အခြေအနေအတွင်းသင့်လုံခြုံမှုကိုရယူရန်လုံခြုံစိတ်ချရသောနေရာချထားမှု
Visiblity: မင်းဘယ်လိုမြင်နိုင်လဲ'သင်၏သေနတ်များနှင့်သင့်အိမ်၌သင်ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ် visitors ည့်သည်များအတွက်လုံခြုံမှုရှိစေလိုသည်။
သေနတ်များသည်သေနတ်များထက် ပို. ကာကွယ်ရန်အတွက်အသုံးဝင်သည်။ သင်၏သေနတ်များ, လက်ဝတ်ရတနာများ, ငွေများစသည်တို့, အဖိုးတန်သောမိသားစုအ0တ်များ, သင်၏လုံခြုံမှုကိုတစ်သက်တာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ်စဉ်းစားပြီးသင်တစ်သက်တာလုံးတွင်သင်စုဆောင်းနိုင်သောအဖိုးတန်ပစ္စည်းများအရေအတွက်ကိုပေးထားသည်'သင်ထင်သည်ထက်သေနတ်များလုံခြုံမှုကိုဝယ်ယူရန်အကြံပြုပါသည်'လိုအပ်ပါတယ်
အကြီးစားအကြီးစား Duty မီးသတ်ကိုခံနိုင်ရည်ဂွန် Safe 120 မိနစ်မီးသတ်ခဲ့သည် Rating
2 backup လုပ်ထား access ကိုသော့နှင့်အတူ * အပြည့်အဝသည် Programmable လျှပ်စစ်သော့ခတ်1200 မှတက် 120 မိနစ် * မီးသတ်ကာကွယ်မှု° F ကိုချဲ့ palusol မီးနှင့်မီးခိုးတံဆိပျမြားနှငျ့ဘေးကင်းလုံခြုံ၏အတွင်းပိုင်းမှအပြည့်အဝသုံးစွဲနိုင်ဘို့ * အကြီးစားတာဝန်, pry ခံနိုင်ရည်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုတံခါးများနှင့်အတူအစိုင်အခဲသံမဏိနံရံများကိုလွှဲ 180 °ကြောင်း1 ထိပ်တန်းကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းနဲ့ 1 ချိန်ညှိခြမ်းကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းအပါအဝင် * အပြည့်အဝချိန်ညှိစင်ပေါ်,